I metro station "Domodedovo". Eshukunyiswe izindiza
"Domodedovo" - omunye zezindiza ezintathu edolobheni, ethola lenqwaba izindiza kanye metro station "Domodedovo" kuyinto okufana emnyango kuso. Yiqiniso, ungasebenzisa Aeroexpress, okuyinto isuka Paveletsky sesitimela, kodwa izakhamuzi izifunda aseningizimu enhloko-dolobha kungase kungabi ukhululekile kakhulu. Indlela elula uzithola amabhasi kanye minibuses kusukela Terminus sezindiza edude esiteshini, ikakhulu njengoba beshaya umgwaqo njalo ngemva kwemizuzu engu-15 kanye nesikhathi travel isigamu sehora.
"Domodedovo" esiteshini komhlaba lavulwa ngo-1985, igama layo ngqo exhumene ne edolobheni laseMoscow Isifunda kanye sezindiza, kuyilapho kumadokhumenti iphrojekthi ekuqaleni njengezithombe "Borisov" - endaweni indawo. Le phrojekthi akhiwa abaklami N. Samoilov noN Aleshin, wayeyinhloko yabathathu wezakhiwo Metrogiprotrans futhi wasungula iphrojekthi iziteshi kaMasipala 20.
ongaphansi komhlaba esiteshini apharathasi "Domodedovo" imodeli, ukujula yayo ingaphansi kuka-10 metres. Izindonga "Domodedovo" zibhekene zemabula grey nomhlophe. The main theme kusuka esiteshini iyona civil aviation - ku panel ezimbili ngomculi M. Alexeyeva ukuboniswa ukushayela izindiza nomgibeli izibalo. Ngakho, waphinda uqokomisa isimo sengqondo isiteshi sezindiza. Ngaphezu kwalokho, isiqondiso sokukhanyisa esiteshini ungathi wokukhanyisa gumbi. Esitezi we setshe legwadle selibekiwe isakhiwo iphethini weJiyomethri.
"Domodedovo" - komhlaba, esebenzisa nsuku bakha ingxenye enkulu yabamemezeli abakhileyo kulezi zindawo ezimbili ezinkulu - Orekhovo-Borisovo Yuzhnoye futhi Orekhovo-Borisovo North. Ngemuva kokuqala Aeroexpress ukugeleza egijimela sezindiza futhi aphume abagibeli kwehle appreciably, kodwa hhayi yomile ngokuphelele. Inani layo namanje ngokwanele ukuba uthole umsebenzi ezinkampanini eziningana zokuthutha. ukwakhiwa Ngokushesha sihlelwe ezinkulu kwezokuthutha impambano ihabhu ne abaphuca enkulu
yokupaka kanye nokuvuselelwa kwazo ezinkulu eduze emnyango esiteshini, kuhlanganise ukwakhiwa eziningana kanye ukunwetshwa ezitaladini eduze ukuze kulungiswe isimo yezokuthutha.
Ngemva kokuvula uhlelo lwamuva lwe-"Alma-Ata" komhlaba "Domodedovo" lesithathu kusukela esiteshini ukuphela. Ground Ezindaweni zokwamukela izivakashi, njengoba ngokuvamile kwenzeka ezindaweni okuhlalwa kuzo, esiteshini ayinakho indlela yokuphuma ngokusebenzisa izindima komhlaba, elise ezimpambanweni zomgwaqo Walnut Boulevard Kashira Highway. Eduze ophumayo kusukela
esiteshini izitobhi ahlelwe kanye namabhasi, kulandela bebheke sezindiza Domodedovo, kanye nemizana eseduze. Ngaphezu kwalokho, eduze esiteshini elise Museum-Reserve Tsaritsyno futhi Biruliovsky Forest Park. Futhi eseduze kukhona Museum ezivulekile eziphathelene nezempi futhi lesikhumbuzo ukuze "abasebenzi ekhaya phambi".
Yiqiniso, metro station "Domodedovo" akezi izivakashi zakwamanye amazwe ngokuthi "Kyïv" futhi "Paveletskaya". Kodwa alula kuyinto umusa, ake kulesi siteshi kudlala indima kuphela iphuzu yokuhamba eya sezindiza ezinkulu.
Connections kusukela "Ekaterinburg-Chelyabinsk"
Botanical Garden RAS: Lapho kuba? isithombe
Kanjani futhi kuphi uphumule ehlobo?
Ingabe Sherlock Holmes indlela deductive esetshenziswa?
Ama-movie anezinja endimeni yesihloko: i-adventure, idrama, i-comedy: uhlu lwezinto ezihamba phambili
Estée Lauder Advanced Night yokulungisa - ikhambi kangcono isikhumba
I plant canola. amafutha canola
Amanita: iresiphi of tincture utshwala
Uyini engqondweni yabo yokucabanga?
Khanyisa Ngo ifotho
Waterpark e Kislovodsk. Izibuyekezo
Isethi eziyisisekelo ukuqeqeshwa ngendlela ejimini ngoba amantombazane
Yekuchumana (vula-based) umyalelo ukuvalwa inkampani nge umhlanganyeli olulodwa